Umsebenzi weNdaba1: Indawo yokuThengisa isiQulatho seNtengiso seDijithali | Martech Zone
Imisebenzi yamabali1 ibonelela ngeqonga lokuboniswa kweselfowuni yokuxhasa iqela lakho lendawo ngezixhobo zokunceda ukukhulisa ukuthembeka, ukulungelelanisa isicwangciso sentengiso kunye nokwenziwa kwentengiso, kunye nokukhulisa ubudlelwane beshishini kunye nokuqonda okwenene kunye nedatha enokwenzeka.
Umsebenzi wamabali1 omtsha Indawo yokufumana ithuba ibonelela abathengisi beentsimi ngesakhono sokuvumelanisa indawo yabo yangoku ngeCRM ngefowuni ukuze babone imimandla ekufutshane kunye neendawo zabaxumi kunye neeprofayili. I-Opportunity Locator yenza ngokwezifiso ulwazi olusekwe kwindawo yangoku yomsebenzisi, ibeka phambili amathuba okuqeshwa kwaye ifumane ulwazi lwangoku lokunxibelelana ngokusuka kukhangelo lwamagama alula. NgeLungelo lokufumana indawo, abathengisi banokufaka kwakhona ulwazi kwiifowuni nakwiintlanganiso kwiCRM.
Nje ukuba ubandakanyeke, i-Opportunity Locator isebenza ngokuvumelanisa nendawo okuyo ngoku umthengisi ngesixhobo sayo esiphathwayo. Ulwazi luyakhutshwa kwinkampani i-CRM iye kwisixhobo esisekwe kwidatha yendawo kunye neendlela zokukhangela. Ulwazi oluphambili malunga nomthengi osondeleyo kunye neofisi ezinokubakho kubandakanya ukubekwa phambili kwamathuba ziyafumaneka ngokukhangela amagama aphambili kunye / okanye amagama okugqibela. Iifowuni kunye neentlanganiso zinokungena kwi-CRM nge-Opportunity Locator, ukuphelisa ukubuyela eofisini.
Kubalulekile ukuba abathengisi bandise ixesha labo ebaleni ukuze bafezekise eyona mveliso inokwenzeka. Indawo yokufumana ithuba sesinye sezixhobo zokuqala zokuthatha amandla eCRM kwaye siyiguqulele kwintengiso enkulu. Ukukwazi ukufumana ulwazi oluphambili malunga nabaxumi kunye nabathengi abanokubakho kwindawo ekujoliswe kuyo ivumela abathengisi ukuba bongeze iintlanganiso, banciphise ixesha lokufowuna kunye ne-imeyile, kwaye kuthintelwe ukubuyela e-ofisini ngokungeyomfuneko ukufikelela kwiCRM. Oku kukhokelela ekufumaneni inzuzo engaqhelekanga ngokwempumelelo yabathengisi, kwaye kunciphise kakhulu iindleko zamashishini zombutho. UJeff Fritz, u-CEO weeNdaba zeNdaba1
Iimpawu zeMisebenzi yamaBali1
Ukufikelela ngaphandle kweintanethi -Ukufikelela kumxholo owufunayo ngaphandle konxibelelwano, umxholo ungqamene nesixhobo sakho ukufikelela ngaphandle kweintanethi.
Umdibaniso ulungile -Nxibelelana netekhnoloji yeshishini osele uyisebenzisile namhlanje njengeSalesforce, iNetsuite, iDropbox, iOracle, iBlackboard nokunye. Iqonga lethu lilindile.
Ukwanda kokuhambelana ebaleni - ukuthengisa kuya kuhlala kuneyona nto ihlaziyiweyo kwidesktop, ilaptop, ithebhulethi okanye i-smartphone.
Indawo enye yezixhobo zakho zokuthengisa -Umthombo ocwangcisiweyo, wokuya kuzo zonke izinto zakho zokuthengisa. Sondela kufutshane nokwenza lula inkqubo yakho yokuthengisa.
Izongezo zesiko -Izongezo ezisebenzisanayo ezinceda ukubonisa ixabiso. Hambisa amava okuthenga afanele ukukhunjulwa.
Itekhnoloji yokuthengisa ekulula ukuyisebenzisa -Iqonga liyilelwe ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ukuxhasa umthengisi weshishini.
tags: Ibhodi emnyamaumxholo wentengiso yedijithaliibhokisi lehlayonetsuiteOracleumxholo wentengisoulawulo lomxholo wentengisoukuthengisa umxholo wedijithaliukuthengisaamabaliUmsebenzi webali kwimfunoamabali1
Ngaba ezi-4 ziFomathi zeB2B ezisebenzayo?
I-RivalIQ: Ukhuphiswano lweendaba zeNtlalo kunye ne-SEO Analytics